Dhaxal-sugaha Sacuudiga oo “qaaday tallaabo uu awooddiisa ku muujinayo” |
Saddex xubno sarsare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga, oo uu ku jiro nin la dhashay boqorka, ayaa loo xiray sababo aan la shaacin, sida ay ku warrantay warbaahinta Mareykanka.
Labo ka tirsan ragga la xiray ayaa ku jiray saraakiisha ugu saameynta badan boqortooyada.
Xiritaanka loo geystay xubnahan ayaa lala xiriirinayaa dhaxal-suge Mohammed bin Salman.
Sanadkii 2017, xubno ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga, wasiirro iyo ganacsato ayaa lagu xiray hoteelka Ritz-Carlton oo ku yaalla Riyadh kaddib markii uu dhaxal-suguhu amray soo xiritaankooda.
Mohammed bin Salman ayaa loo arkayay hoggaamiyaha ay ka go`do talada boqortooyada, kaddib markii u aabbihiis u magacaabay dhaxal-suge sanadkii 2016.
Raggan ayaa la soo xiray aroortii hore ee shalay, sida ay tebiyeen wargeysyada New York Times iyo Wall Street Journal.
Saddexda nin ee la xiray ayaa la sheegay inay kala yihiin boqorka walaalkii ka yar amiir Ahmed bin Abdulaziz, dhaxal-sugihii hore Mohammed bin Nayef, iyo wiil ay dhaxal-sugaha ilmo adeer yihiin, amiir Nawaf bin Nayef.
Mohammed bin Nayef wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha kahor inta aan xilka laga qaadin oo xabsi guri uusan gelin Mohammed Bin Salman sanadkii 2017.
Ilaalo xiran dhar madow iyo maaskrada wejiga ayaa galay guryaha ragga la xiray, iyagoo baaray guryahooda.
Haddii la xaqiijiyo, waxay tani noqon doontaa tallaabo muhiim ah oo uu dhaxal-sugaha awoodda badan ee Sacuudiga Mohammed bin Salman uu ku muujiyo awooddiisa. Amiir Ahmed bin Abdelaziz wuxuu ka mid yahay wiilasha fara ku tiriska ah ee ka haray aabbihii dalkaas Boqor Abdelaziz, waxaana aad u xushmeeya xubnaha qoyska boqortooyada ee talada haya.
Amiirka kale ee sare, Mohammed bin Nayef, wuxuu ahaa dhaxal-suge safka hore ku jira kahor inta aan si kedis ah loo beddelin saddex sano kahor. Kahor intaas, markii uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda, waxaa lagu xusuustaa inuu wiiqay kacdoonkii al-Qaeda ee Sacuudiga hareeyay sanadihii 2000.
Ma jiro wax xaqiijin amaba beenin ah oo ku saabsan warkan ay qoreen warbaahinta Mareykanka, balse aalaaba arrimaha la xiriira boqortooyada Sacuudiga waa la qariyaa.
Mohammed bin Salman ayaa ammaan dunida ka muteystay sanadkii 2016 markii uu ballan qaaday isbeddello xiriir ah oo isugu jira kuwo dhaqaale iyo bulsho.
Waxaase sidoo kale lala xiriiriyay eedeymo dhowr ah oo ay ku jirtay dilkii loo geystay weriyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi oo sanadkii 2018 lagu dhex dilay gudaha safaaradda Sacuudiga ee Istanbul.
Maalmihii la soo dhaafay Sacuudiga ayaa qaadayay tallaabooyin uu uga hortagayo caabuqa dilaaga ah ee coronavirus.
Ajaanibta ayaa loo diiday inay dalkaasi u tagaan gudashada Cumrada, waxaana jira su`aalo la xiriira in gudashada Xajkana la joojin doono iyo in kale.
Khamiistii la soo dhaafay magaalada barakeysan ee Maka ayaa la firaaqeeyay si loo nadiifiyo.